Rating: SKU: 6384-92-5. Category: Nootropics ntụ ntụ
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) kwado bụ ihe amino acid nke na - arụ ọrụ dị ka agonist doro anya na onye na - anabata NMDA, yabụ na - egosi omume nke neurotransmitter glutamate na onye nnabata ahụ. N'adịghị ka glutamate, NMDA na-ejikọ ma na-achịkwa naanị onye natara n'elu, ma ọ bụghị ndị na-anabata glutamate ndị ọzọ. NMDA bụ ihe na-emepụta mmiri nwere ike ịnweta mmiri nke anaghị ahụkarị na anụ ahụ. Ejiri ya rụọ ọrụ na 1960. NMDA bụ excitotoxin; àgwà a nwere ngwa na nyocha neuroscience omume.
Usoro Molecular: C5H9NO4
Molekụla arọ: 147.13
Ozu oru tinye n'ọrụ a Usoro dara n'okpuru okwu “lesion ọmụmụ.” Ndị nchọpụta na-etinye ntụ ntụ NMDA na mpaghara ụfọdụ nke ụbụrụ (anụmanụ) ma ọ bụ ụbụrụ na-esote ya iji nwalee omume nke mmasị, dị ka omume ndị ọrụ. Ọ bụrụ na emebi omume ahụ, ọ na-atụ aro na anụ ahụ ebibi bụ akụkụ nke mpaghara ụbụrụ nke mere onyinye dị mkpa na ngosipụta nkịtị nke omume ahụ. Ihe atụ nke ndị na-emegide NMDA na-anabata ntụ ntụ bụ APV, dextromethorphan, ketamine, phencyclidine (PCP), riluzole, na memantine. A na-akpọkarị ha dị ka ndị na-emegide NMDA ntụ ntụ nnabata.
O-Methyl-D-Aspartic-Acid (NMDA ntụ ntụ) bụkwa otu n’ime ihe ndị bụ isi na Red Growth, ụlọ nkwonkwo kachasị elu nke Red Supplement, na-eme ka ike na testosterone na-arịwanye elu.